Industrial bokuhlamba Machine, yomsuki weengubo Extractor - Taifeng
Automatic ayina, Machine
Oluzenzekelayo Tilting yomsuki weengubo Extractor
Automatic yomsuki weengubo Extractor
Uthango yomsuki weengubo Extractor
Ingubo Ukondla Machine
Gas iingxoxo ezitshisayo zebanga Ukuqwayita Machine
High-Ukuphumelela Ukuqwayita Machine
Xolani Ukusonga Machine
Sinikeza Qualityequipment High
machine ayina oluzenzekelayo
oluzenzekelayo wokucoca extractor
Jiangsu Taifeng Machinery Manufacturing Co., ltd. kuyinto enkulu umenzi izixhobo ngokuhlamba eyinkunzi ebhalisiweyo million 45,2 Yuan. Le nkampani lilungu Light Industry Machinery Association, kwaye ibekwe Taizhou City, kwiPhondo Jiangsu - idolophu nguSihlalo Hu Jintao. Inkampani yethu imi iteksti River Region Delta. Le nkampani eneemfuno ezizodwa ukuvelisa izixhobo ukuhlamba mveliso, nto leyo brand omuhle ukuba ezihotele, izibhedlele, iindawo zokutyela, eyolukiweyo, impahla kunye noshishino ukuhlanjwa.
Responsible China, Factory onoxanduva
Ekubeni coronavirus omtsha kwenzeka China ukususela ekupheleni konyaka ophelileyo apho abe bhubhane kakhulu kuchaphazela China ingakumbi umzi ukuze Wuhan.In alwe intsholongwane thina Chinese sonke silandele kukhokela karhulumente kwaye ngoku senza konke okusemandleni ethu ukuzama ukoyisa oku. Nceda ungakhathazeki Abu ...
Sivuyisana ngokufudumeleyo ukuba Jiangsu Taifeng nabalimi lo CCCC
Ngo September 25, Jiangsu Taifeng walungelelanisa bonke abasebenzi ukuba baye Zhejiang.
Bavuka kusasa ngengomso, kunye ilanga eqaqambileyo, nathi sahamba uhambo lwethu Zhejiang. Wonke waba nexesha enqabileyo kunye ukuhamba kunye, baza babonisa ukuba bavuya gqitha wahleka endleleni. I elihle guide lady wanikela ingcaciso ebalulekileyo ukwenza uhambo umdla ngakumbi. ...
Company isaziso Igama utshintsho
Ngenxa iimfuno zophuhliso, Taizhou Century Taifeng Mechanical ne Electrical Equipment Manufacturing Co., Ltd. latshintshelwa Jiangsu Taifeng Machinery Manufacturing Co., Ltd. ngoJulayi 1, 2019, ngemvume yeSebe loLawulo Examination kunye Ukuvunywa Bureau of Taizhou Pharmaceutical High -te ...
Beijing UNIVERSITY OF IZITHUBA kwezoqhakamshelwano
Nanjing FOREING YEELWIMI YEZIKOLO
Jiangsu TAIZHOU ZABANTU HOSPITAL
No.599 Xiangtai Road, Development Zone loQoqosho, Taizhou, Jiangsu kwiPhondo, China
Steam Generator , Heavy Equipment Machinery, Industrial kwamanzi Machine ,